AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA :: Manao velirano i Andry Rajoelina fa ho kandidà hampiray ny Malagasy rehetra • AoRaha
AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA Manao velirano i Andry Rajoelina fa ho kandidà hampiray ny Malagasy rehetra
« Izaho dia kandidà hampiray ny Malagasy rehetra ary tsy mba mpanavakavaka ». Io fehezanteny io no noha­mafisin’ny kandidà laharana faha-13 Andry Rajoelina, nandritra ny fampielezan-kevitra notanterahiny tao Toamasina, ny sabotsy lasa teo. Hiezaka ny hamerina ny firaisankinan’ny Malagasy rehetra izay niniana nopote­hina tamin’ny resaka politika izy ary nanainga ny rehetra hiara-hisalahy eo amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Notsindrian’i Andry Rajoelina nandritra ny lahateny nataony nanoloana an’ireo mponin’i Toamasina tonga maro nanotrona ny fampie­lezan-kevitra tany an-toerana fa tsy mba isan’ireo kandidà manilikilika an’ireo sahirana izy . « Na ny lehibe, na ny tanora na ireo tsy an’asa na ireo sahirana dia tiako daholo. Ny hafa mantsy dia tsy misy afa-tsy ny orinasany ihany no
fantany. Isika dia tsy mba tahaka izany fa hitsinjo ny vahoaka malagasy manontolo », hoy ny kandidà laharana 13.
Velirano amin’ny vahoaka
Namerimberina hatrany ny velirano tamin’ireo mponin’ i Toamasina izy ny amin’ny fananganana orinasa ao an-toerana. Toy izany ihany koa ny hananganana trano mora ho an’ireo vahoaka sahirana. Nohamafisin-dRajoelina nandritra ny fampielezan-keviny kosa ny fahavononany hanangana morontsiraka maoderina ao Toamasina. « Misy milaza hoe inona indray izany? Manome toky aho fa tsy maintsy hovitaintsika avokoa ireo fampanantenana ireo. Izany no antony hanaovako velirano aminareo », hoy izy.
Vahoaka maro indray no nitsena azy hatreny amin’ny seranam-piaramanidina ary niara-dia taminy tao amin’ny toerana manoloana ny Lapan’ny tanàna, ka hatreny amin’ny arabe manamorona ny sisin-
dranomasina ao Toamasina. Tao amin’ny kaominin’i Matanga, Vangaindrano sy tao Mananjary koa no nanohizan’ny kandida laharana faha-13 ny velirano mikasika ny fijerena mano­kana an’ireo tantsaha.
Nampahafantatra sahady i Andry Rajoelina fa hanamboatra tetezana sy hanatsara an’ireo lalana simba any an-toerana. Etsy andaniny ny fanomezana angidim-by hampiasain’ireo mpitandro
ny filaminana hiadiana amin’ny asan-dahalo.
Kojakoja fandrehitra Miaka-bidy ny arina